Mutauro wekuMabvazuva wekuonana nawo: Chinese
comme-un-pro.fr inoita kuti webhusaiti iyi irambe ichishanda nenguva. Kana, zvakadaro, ukasangana nedambudziko kana data rekare, tinozvifarira kana iwe ukatizivisa. Ndokumbira uratidze pawebhusaiti pawakaverenga ruzivo rwusirirwo. Tichatarisa mune izvi nekukurumidza sezvinobvira. Ndokumbira utumire mhinduro yako ne E-mail pa: tranquillus.france@comme-un-pro.fr.
Isu hatisi ivo vane mhosva yekurasikirwa kunokonzerwa nekusakwana kana kushaikwa, kana nekurasikirwa kunokonzerwa nematambudziko anokonzerwa kana nechisimba mukuparadzirwa kweruzivo paInternet, sekukanganisa kana kukanganisa. Kana tichishandisa mafomu ewebhu, tinoita zvese zvatinogona kuchengetedza huwandu hwenzvimbo dzinosungirwa kushoma. Kune chero kurasikirwa kwakatambura semhedzisiro yekushandiswa kwedata, mazano kana mazano anopiwa kana kana pachinzvimbo che comme-un-pro.fr kuburikidza neino webhusaiti, comme-un-pro.fr haitore basa.
Kushandiswa kwewebsite uye zvese zvayo zvikamu (kusanganisira maforamu) zvinoenderana mashoko ekushandiswa. Iko kungoshandisa kwewebhu ino zvinoreva ruzivo uye kugamuchirwa kweaya mamiriro ekushandisa.
Mhinduro uye zvikumbiro zveruzivo rwemunhu zvinotumirwa neemail kana kushandisa fomu rewebhu zvichabatwa nenzira imwecheteyo netsamba. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kutarisira mhinduro kubva kwatiri mukati memwedzi mumwe panguva yekupedzisira. Kana pane zvikumbiro zvakaoma, isu tinokuzivisa iwe mukati memwedzi mumwe kana tichida anokwana mwedzi mitatu.
Chero chero rako data raunotipa sechikamu chemhinduro yako kana kukumbira ruzivo chinongoshandiswa chete zvinoenderana neyedu yekuvanzika.
comme-un-pro.fr inoderedza mutoro wese wezvakanyorwa mumawebhusaiti uko kana kunobva hyperlink kana zvimwe zvinongedzo. Zvigadzirwa kana masevhisi anopihwa nevechitatu mapato ari pasi pemitemo inoshanda nemamiriro ezvinhu echitatu mapato.
Kodzero dzese dzezvivakwa mune zviri muwebhusaiti izvi zvivakwa zvecommun-pro.fr.
Kuteedzera, kugovera uye kumwe kushandiswa kwemagwaro aya kunorambidzwa pasina mvumo yakanyorwa ye comme-un-pro.fr, kunze kwekunge kana zvasvika pamitemo inomanikidzirwa (senge kodzero yekutaura), kunze kwekuratidzwa kwakapesana zvirimo.
Kana iwe uine chero mibvunzo kana saiti yekuwanika nyaya, ndapota usazeze kutibata nesu.
kutaurirana kwakanyorwa uye nemuromo - kudzidziswa kwemahara (14) kodzero (161) Yemunhu uye yehunyanzvi budiriro yemahara kudzidziswa (49) Entrepreneurship yemahara kudzidziswa (81) Excel yemahara kudzidziswa (28) Professional kudzidziswa (104) chirongwa manejimendi yemahara kudzidziswa (15) mutauro wekunze kudzidziswa mahara (9) Mitauro yekune dzimwe nyika nzira uye kuraira (22) Software uye Maapplication emahara kudzidziswa (20) Tsamba muenzaniso (19) mooc (171) zvishandiso google zvemahara kudzidziswa (14) PowerPoint yemahara kudzidziswa (13) Yemahara webmarketing kudzidziswa (72) Kudzidziswa kwemahara kwemashoko (13)